အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးအား ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူခြင်း ဝေဖန်မှုအပေါ် ရှင်းလင်း – Tameelay
အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးအား ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူခြင်း ဝေဖန်မှုအပေါ် ရှင်းလင်း
ရဟန်း နဲ့ မအပ်စပ်ဟု ဝေဖန်မှုအပေါ် ရွှေသင်္ကန်း အလှုခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စာချနာယကအဖွဲ့၏ရှင်းလင်းချက်
ရွှေသင်္ကန်း တစ်ထည်လာလှုတယ်။ အလှုရှင်စိတ်ချမ်းသာအောင် ကိုယ်ပေါ်မှာခန တင်ပြလိုက်တယ် အလှုရှင်ကအဲ့ဓာတ်ပုံကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာFACEBOOK မှာတင်လိုက်တယ်.. ပြဿနာစပေါ်ပါလေရော ပုံကိုယူပြီး တချို့က ဝေဖန်တယ်အပြစ်တင်တယ် ကဲ့ရဲ့တယ်။
ဝေဖန်ပါ အပြစ်တင်ပါ. ဒါပေမယ့်အကြောင်းရင်းကိုသေချာလေ့လာပါ. ရွှေငွေကိုအလှုခံရင်ဘာအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြည်တွင်းပြည်ပ သာသနာပြုဆရာတော် မသိပဲနေပါ့မလား? သံဃစေတိယာဒီနံ အတ္ထာယ ဂဏှန္တဿ ဒုက္ကဋံ- ကိုယ့်အတွက်မပြောနဲ့ သံဃာ စေတီ စသည်တို့အတွက်လက်ခံတောင် ဒုက္ကဋ်သင့်တာ. ( ကင်္ခါ- နှာ၁၇၆) ဒါလောက်တော့ စာသင်တိုက်ပေါင်းများစွာရဲ့ ပဓာနနာယက ဆရာတော်ကြီးသိဒါပေါ့။
သာသနာတော်အတွက်အကျိုးများတဲ့တကာတကာမတွေ လှုဒါန်းလာတဲ့အခါမှာ လုံးဝငြင်းလွှတ်လိုက်ရမလား? ပသန္နာနံ ဘိယျောဘာဝါယ ကလဲရှိသေး အကြောင်းကြောင့်ထောက်စရာတွေကလဲရှိသေး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
အခြေနေရ ရွှေငွေလှုဒါန်းလာရင်အပ်စပ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်။ “ သစေ ပန စိတ္တေန သာဒိယတိ၊ ဂဏှိတုကာမော ဟောတိ၊ ကာယေန ဝါ ဝါစာယဝါ “ နယိဒံ ကပ္ပတီ” တိ ပဋိက္ခိပတိ၊ ကာယဝါစာဟိ အပ္ပဋိက္ခိပိတွာ သုဒ္ဓစိတ္တော ဟုတွာ “ နယိဒံ အမှာကံ ကပ္ပတီ” တိ နသာဒိယတိ၊ ဝဋ္ဋတိ။ ( ကင်္ခါအဋ္ဌကထာ- နှာ ၁၇၅) ဒီ အဆိုအရ ရွှေငွေလာလှုတယ် စိတ်ဖြင့်သာယာတယ် , ခံယူလိုတယ်, သို့သော် ကိုယ်ဖြင့် ဖြစ်စေ, နှုတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ “ ဒီရွှေငွေသည် မအပ်” ဟု ပယ်မြစ်လျှင်၊
သို့မဟုတ်— ကိုယ်နှုတ်တို့ဖြင့် မပယ်မြစ်ဘဲ စင်ကြယ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ “ ဤရွှေငွေသည် ငါတို့အား မအပ်” ဟု မသာယာလျှင် အပ်ပါသည်၊ အပြစ်မရှိပါ။ ( ကင်္ခါရှင်းတမ်း နှာ -၂၇၇… အရှင်မုနိန္ဒာဘိဝံသ) ဒီတော့ အလှုရှင်၏ စေတနာကိုငဲ့၍ ကိုယ်နှုတ်ဖြင့် မလှုပါနဲ့ မတားပစ်မိသော်လည်း စင်ကြယ်တဲ့စိတ် နဲ့ ဒီရွှေငွေတွေဟာ မအပ်ဟု နှလုံးသွင်းကာ မသာယာလျှင် အပြစ်မဖြစ်ပါ..
ကြားဖူးတဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးကို ကိုးကားပါရစေ တဆင့်ကြားသာဖြစ်ကြောင်း ကြိုဝန်ခံပါရစေ…. တနေ့ တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဆရာတော်တစ်ပါးအား တကာမတစ်ယောက်က ကြည်ညိုလို့ ရွှေသောက်ရေခွက်လာလှုတယ်၊ ဆရာတော်ကြီးက မအပ်ဘူးလို့ပြောပြီးအလှုမခံပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူ့သဒ္ဓါတရားကို ထောက်ပြီး ရွှေခွက်နှင့် ရေတခွက်အကပ်ခံပြီး သောက်ပြလိုက်တယ်. အလှုရှင်ကျေနပ်သွားတယ်.
ဒီလိုပါပဲ အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးဟာလဲ တကာတကာမတွေရဲ့ သဒ္ဓါတရားကိုငဲ့ပီး ခနတဖြုတ် ကိုယ်ပေါ်မှာ တင်ပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည် အမြဲ ဝတ်ရုံသုံးစွဲ ခြင်းအလျဉ်းမရှိပါ. ပြီးလျှင်ပြီးချင်း အနာမာသ အကပ္ပိယဝတ္ထု အဖြစ် ကပ္ပိယကာရက ကို ညွှန်ပြပြီးဖြစ်ပါကြောင်းဖြေရှင်းအပ်ပါသည်။
အကြောင်းရင်းကို မသိပဲ ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းများ နောက်နောင်မပြုလုပ်ဖို့ကိုလဲ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ပရဝဇ္ဇာနုပဿိဿ၊ နိစ္စံ ဥဇ္ဈာနသညိနော။
အာသဝါ တဿ ဝဍ္ဎန္တိ၊ အာရာ သော အာသဝက္ခယာ။
( ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ ဒု -နှာ ၂၃၉)
အလိုတျောပွညျ့ ဆရာတျောကွီးအား ရှသေင်ျကနျး ကပျလှူခွငျး ဝဖေနျမှုအပျေါ ရှငျးလငျး
ရဟနျး နဲ့ မအပျစပျဟု ဝဖေနျမှုအပျေါ ရှသေင်ျကနျး အလှုခံခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ စာခနြာယကအဖှဲ့၏ရှငျးလငျးခကျြ
ရှသေင်ျကနျး တဈထညျလာလှုတယျ။ အလှုရှငျစိတျခမျြးသာအောငျ ကိုယျပျေါမှာခန တငျပွလိုကျတယျ အလှုရှငျကအဲ့ဓာတျပုံကို ဝမျးမွောကျဝမျးသာFACEBOOK မှာတငျလိုကျတယျ.. ပွဿနာစပျေါပါလရေော ပုံကိုယူပွီး တခြို့က ဝဖေနျတယျအပွဈတငျတယျ ကဲ့ရဲ့တယျ။
ဝဖေနျပါ အပွဈတငျပါ. ဒါပမေယျ့အကွောငျးရငျးကိုသခြောလလေ့ာပါ. ရှငှေကေိုအလှုခံရငျဘာအပွဈဖွဈတယျဆိုတာ ပွညျတှငျးပွညျပ သာသနာပွုဆရာတျော မသိပဲနပေါ့မလား? သံဃစတေိယာဒီနံ အတ်ထာယ ဂဏှန်တဿ ဒုက်ကဋံ- ကိုယျ့အတှကျမပွောနဲ့ သံဃာ စတေီ စသညျတို့အတှကျလကျခံတောငျ ဒုက်ကဋျသငျ့တာ. ( ကင်ျခါ- နှာ၁၇၆) ဒါလောကျတော့ စာသငျတိုကျပေါငျးမြားစှာရဲ့ ပဓာနနာယက ဆရာတျောကွီးသိဒါပေါ့။
သာသနာတျောအတှကျအကြိုးမြားတဲ့တကာတကာမတှေ လှုဒါနျးလာတဲ့အခါမှာ လုံးဝငွငျးလှတျလိုကျရမလား? ပသန်နာနံ ဘိယြောဘာဝါယ ကလဲရှိသေး အကွောငျးကွောငျ့ထောကျစရာတှကေလဲရှိသေး ဘယျလိုလုပျမလဲ?
အခွနေရေ ရှငှေလှေုဒါနျးလာရငျအပျစပျအောငျလုပျလို့ရတဲ့နညျးရှိပါတယျ။ “ သစေ ပန စိတ်တနေ သာဒိယတိ၊ ဂဏှိတုကာမော ဟောတိ၊ ကာယနေ ဝါ ဝါစာယဝါ “ နယိဒံ ကပ်ပတီ” တိ ပဋိက်ခိပတိ၊ ကာယဝါစာဟိ အပ်ပဋိက်ခိပိတှာ သုဒ်ဓစိတ်တော ဟုတှာ “ နယိဒံ အမှာကံ ကပ်ပတီ” တိ နသာဒိယတိ၊ ဝဋ်ဋတိ။ ( ကင်ျခါအဋ်ဌကထာ- နှာ ၁၇၅) ဒီ အဆိုအရ ရှငှေလောလှုတယျ စိတျဖွငျ့သာယာတယျ , ခံယူလိုတယျ, သို့သျော ကိုယျဖွငျ့ ဖွဈစေ, နှုတျဖွငျ့ ဖွဈစေ “ ဒီရှငှေသေညျ မအပျ” ဟု ပယျမွဈလြှငျ၊
သို့မဟုတျ— ကိုယျနှုတျတို့ဖွငျ့ မပယျမွဈဘဲ စငျကွယျသောစိတျရှိသညျဖွဈ၍ “ ဤရှငှေသေညျ ငါတို့အား မအပျ” ဟု မသာယာလြှငျ အပျပါသညျ၊ အပွဈမရှိပါ။ ( ကင်ျခါရှငျးတမျး နှာ -၂၇၇… အရှငျမုနိန်ဒာဘိဝံသ) ဒီတော့ အလှုရှငျ၏ စတေနာကိုငဲ့၍ ကိုယျနှုတျဖွငျ့ မလှုပါနဲ့ မတားပဈမိသျောလညျး စငျကွယျတဲ့စိတျ နဲ့ ဒီရှငှေတှေဟော မအပျဟု နှလုံးသှငျးကာ မသာယာလြှငျ အပွဈမဖွဈပါ..
ကွားဖူးတဲ့ အဖွဈပကျြလေးကို ကိုးကားပါရစေ တဆငျ့ကွားသာဖွဈကွောငျး ကွိုဝနျခံပါရစေ…. တနေ့ တိပိဋကဓရ ဓမ်မဘဏ်ဍာဂါရိက ဆရာတျောတဈပါးအား တကာမတဈယောကျက ကွညျညိုလို့ ရှသေောကျရခှေကျလာလှုတယျ၊ ဆရာတျောကွီးက မအပျဘူးလို့ပွောပွီးအလှုမခံပါဘူး၊ ဒါပမေယျ့ သူ့သဒ်ဓါတရားကို ထောကျပွီး ရှခှေကျနှငျ့ ရတေခှကျအကပျခံပွီး သောကျပွလိုကျတယျ. အလှုရှငျကနြေပျသှားတယျ.
ဒီလိုပါပဲ အလိုတျောပွညျ့ ဆရာတျောကွီးဟာလဲ တကာတကာမတှရေဲ့ သဒ်ဓါတရားကိုငဲ့ပီး ခနတဖွုတျ ကိုယျပျေါမှာ တငျပွလိုကျခွငျးသာဖွဈသညျ အမွဲ ဝတျရုံသုံးစှဲ ခွငျးအလဉျြးမရှိပါ. ပွီးလြှငျပွီးခငျြး အနာမာသ အကပ်ပိယဝတ်ထု အဖွဈ ကပ်ပိယကာရက ကို ညှနျပွပွီးဖွဈပါကွောငျးဖွရှေငျးအပျပါသညျ။
အကွောငျးရငျးကို မသိပဲ ပွဈတငျဝဖေနျခွငျးမြား နောကျနောငျမပွုလုပျဖို့ကိုလဲ အသိပေးအပျပါသညျ။
ပရဝဇ်ဇာနုပဿိဿ၊ နိစ်စံ ဥဇ်ဈာနသညိနော။
အာသဝါ တဿ ဝဎ်ဍန်တိ၊ အာရာ သော အာသဝက်ခယာ။
( ဓမ်မပဒအဋ်ဌကထာ ဒု -နှာ ၂၃၉)
ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော် မြို့နယ်က လှည်းဆိပ်ရွာမှာ တရားမဝင် ဘာသာရေး အဖွဲ့ တစ်ခု ထူထောင်ပြီး လူငယ်တွေအပေါ် စည်းရုံးသိမ်းသွင်း ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလျော်မကန် ဆောင်ရွက်တာတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် သာသနာရေး ဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့က စုံစမ်း …
အဘ နဲ့ အဖွား နှစ်ယောက်လုံး အရမ်း ငိုရှာတယ်…။
မျက်​စိမမြင်​ရှာ​တော့တဲ့ အ​မေအိုကြီးခမျာ သားလက်​ကို မလွတ်​တမ်း ကျစ်​ကျစ်​ပါ​အောင်​ဆုပ်​ပြီး ငိုပါ​တော့တယ်​… အဘကလဲ အ​မေလက်​ကို ဆွဲလို့ ရှိုက်​ကြီးတငင်​ ငို​နေရှာတယ်​… ရင်​​တွေတုန်​လို့ဆို ရင်​ဘတ်​​လေး​တွေ ဖိပြီး ငို​နေလိုက်​ကြတာများ ပုံ့တို့ပါ မျက်​ရည်​ကျရပါ​တော့တယ်​…. အဖွားက ၈၆ နှစ်​ မျက်​စိနှစ်​ကွင်း လုံးဝအလင်းမရရှာ​တော့ပါဘူး… သားသမီး ၃ ​ယောက်​ရှိတဲ့အနက်​ …